Boqoradda Letizia ee Spain ayaa dib u warshadaynaysa goon ubax ah naqshadeeye ay jeceshahay - teles relay
Boqoradda Letizia ee Spain ayaa dib u warshadaynaysa goon ubax ah naqshadeeye ay jeceshahay
Bilowga sanadka ayaa la iskudayey qoyska boqortooyada Isbaanishka... Infanta Pilar de Bourbon wuu dhintay, Arbacada Janaayo 8, da'da 83, sida uu shaaca ka qaaday maalinlaha reer Iberia El Pais. Hooyo shan carruur ah iyo kalkaaliso caafimaad xirfad ahaan, waxayna ahayd carmalkii Luis Gómez-Acebo, oo dhintay 1991. Waxay la ildaran tahay kansarka mindhicirka weyn ee ay la dagaallamaysay muddo ka badan hal sano, ugu dambeyntiina wuxuu u dhintay cudurka . Aad ugu dhow Infanta Pilar de Bourbon, Boqoradda Letizia ee Isbaanishka ayaa baroordiiq ku jirta Laakiin inkasta oo ay ku jirtay xilligii adkaa ee ay soo martay, afadii King Felipe VI wuxuu sii wadaa waajibaadkiisa.
Maalinta ku xigta, Khamiista Janaayo 9, ama maalin ka hor aaska Pilar de Bourbon, Boqoradda Spain Letizia waxay tagtay kulan ay la yeelatay Xiriirka Isbaanishka ee Cudurrada Naadiga ah ee Madrid. Siideyntaan cusub, boqorka ayaa sharad ku galay jaakad madow iyo caddaan oo leh qaab houndstooth ah. Shan maalmood kadib, waa siideyn rasmi ah oo cusub kaasoo ahaa kalandarka. Talaado Janaayo 14, amiirkii wuu qaatay xubno ka socda Xiriiriyaha Filimada, oo loo yaqaan FEDICIN, oo ku yaal Aqalka Saxaaradda Zarzuela ee Madrid.
The "Reina" ee dib-u-warshadaynta
Kulankan cusub, Boqoradda Letizia ee Isbaanishka waxay sharad ku gashay dhar qurux badan, sidii caadiga ahayd. Hooyada 47 jirka ah ayaa sharad ku gashay goon midi madow oo leh ubax, waxaa sameeyay naqshadeeyaha uu jecelyahay ee Carolina Herrera. Si ay ula socoto gabalkan quruxda badan, Boqoradda Letizia ee Isbaanishka ayaa xirtay dheecaan cas oo dheecaan leh oo uu qoray Hugo Boss, suun madow, cidhiidhi madow iyo kabo madow bowdyaha dhaadheer sidoo kale. Taageerayaasha qoyska boqortooyada Isbaanishku xaqiiqdii way ogaadeen, maahan markii ugu horeysay in hooyada amiirrada Leonor iyo Sofia gashado isla goonnadaas. Bishii Nofeembar 8, intii lagu guda jiray booqashada Seville ee ballanqaad la xiriira Akadeemiyadda Boqortooyada Isbayn, Boqortooyada ayaa mar hore gashatay dharkeeda midi ee Carolina Herrera midi, oo ay horay ula jaanqaadday labbiska Hugo Boss. Lama dafiri karo inay tahay boqoradda Spain ee Letizia la "Reina" dib u warshadaynta.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/la-reine-letizia-d-espagne-recycle-une-jupe-a-fleurs-de-sa-creatrice-fetiche-1071757
Carafaat - VIDEO